Xuska 11aad Ee 7aadka Cashuurta Dakhliga Dowlada Oo Maanta Lagu Qabtay Magaalada Jig-jiga
Jig-jiga(RH)Waxaa maanta Magaalada Jig-jiga ee Xarunta Dowlad Deegaanka Soomaaliada itoobiya lagu Qabtay Munaasibad lagu Xusayey xuska 11aad ee 7aadka canshuuraadka dakhliga Dowlada DDSI. Kaas oo ay ka sooqaybgaleen masuuliyiinta wakaalada dakhliga DDSI Odayaal dhaqameedka deegaanka iyo Marti Sharaf kale.
Xafladan ayaa waxaa furtaankeedii khudbad muhiim ah ka soo jeediyay Maareeyaha Guud Ee Wakaalada Dakhliga Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo sheegay in munaasabadani ay kusoo aaday xili ay xukuumada deegaanku ay guulo wax ku ool ah kasoohooyisay dakhliga deegaanka. Iyadoo qorshayaasha fulinta kor uqaadida dakhligu ay lafdhabar u tahay kamidho dhlinta qorshayaasha horumarineed iyo kuwa kaabayaasha dhaqaale.
Maareeyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa u mahadcelyay ganacsatada deegaanka iyo waliba dhamaan hawlwadeenada dakhliga. wuxuuna tilmaamay in xukuumada DDSI ay qaadatay qorshayaal cadacad oo ku aadan horumarinta ganacsatada sharciga ah iyo wlaiba ladagaalanka ganacsiga sharcidarada ah ee kontrobaanka. Maareeyaha ay carabka kudhuftay in qorshayaasha kor uqaadida dakhliga deegaanku uu yahay mid xawli kusocda islamarkaana lasii xoojinayo si deegaanku iskufilaansho uga gaadho dhinaca dakhliga.
maareeyaha dakhlkiga iyo jibriyada dalka Gobsaye oo isna ka hadlay munaasabadan ayaa sheegay in dakhligu uu yahay adeegyada ugu muhiimsan ee bulshada looqabto islamarkaana kor uqaada horumarka. Wuxuuna xusay in ganacsiga sharcidarada ahi uu yahay mid caqabad ku ah horumarka dalka islamarkaana ay muhiim tahay in ganacsatadu ka digtoonaato.
Dhanka kale, munaasabadan ayaa waxaa qayb ka ahaa su’aalo iyo dood-cilmiyeedyo kuaadan nidaamka canshuur bixinta islamarkaana ay jawaabo cilmiyaysan ka bixinayeen masuuliyiinta dakhligu.
Isku soo wada-duuboo munaasabadan xuska 11aad ee 7aadka dakhliga ayaa waxaa halkudhig looga dhigay ‘’ bixinta casnhuurku waxay lafdhabar u tahay horumarka iyo mustaqabalka dalkeenu higsanayo.